Ny zavatra tokony ho fantatry ny tompona orinasa Ecommerce momba ny Shopify SEO | Martech Zone
Ny zavatra tokony ho fantatry ny tompona orinasa Ecommerce momba ny Shopify SEO
Alarobia, Septambra 13, 2017 Douglas Karr
Niasa mafy ianao tamin'ny fanamboarana tranokala Shopify ahafahanao mivarotra vokatra miresaka amin'ny mpanjifa. Nandany fotoana ianao nisafidianana ilay lohahevitra, nametrahana ny katalaoginao sy ny famaritana ary ny fananganana ny drafi-pivarotana anao. Na izany aza, na manaitra ny fahitana ny tranokalanao na mora toy inona ny fitetezana azy, raha tsy voatsara ny motera fivarotanao, dia kely ny vintana hisarihana ireo mpihaino kendrena anao.
Tsy misy lalana manodidina azy: ny SEO tsara dia mitondra olona maro kokoa amin'ny fivarotana Shopify anao. Data namboarin'i MineWhat nahita izany 81% amin'ny fikarohana ataon'ny mpanjifa vokatra alohan'ny anaovany fividianana. Raha toa tsy toa avo lenta kokoa ny fivarotanao dia mety tsy hivarotra ianao - na dia avo lenta kokoa aza ny vokatrao. SEO dia manan-kery hanararaotra ny mpanjifa maniry hividy, na hitondra azy ireo.
Izay ilain'ny fivarotana fivarotana anao
Ny fivarotana Shopify rehetra dia mila fototra tsara ho an'ny SEO. Ary ny fototra SEO rehetra dia miorina amin'ny teny lakile tsara. Raha tsy misy fikarohana fikarohana lehibe, tsy ho kendrenao mihitsy ny mpihaino marina, ary rehefa tsy kendrenao ny mpihaino marina dia kely ny vintana hisarihana olona mety hividy. Ankoatr'izay, rehefa fantatrao ny momba ny fikarohana nataonao, azonao atao ny mampihatra izany fahalalana izany amin'ny sehatra hafa ao amin'ny orinasa, toy ny marketing amin'ny atiny.
Atombohy ny fikarohana ny teny lakile amin'ny alàlan'ny fananganana lisitr'ireo teny lakile izay heverinao fa mifandraika amin'ny orinasa. Aza adino manokana eto- raha mivarotra kojakoja any amin'ny birao ianao, tsy midika izany fa tokony hanao lisitra teny lakile ho an'ny teny mifandraika amin'ny famatsiana birao an'ny vokatra tsy amidinao ianao. Satria tsy mahasarika olona liana amin'ny fitaovan'ny birao izany, tsy midika izany fa mankasitraka ny fandehanany amin'ny tranonkala iray izay tsy manana ny vokatra notadiavin'izy ireo voalohany tao amin'ny Google.
Use fitaovana fikarohana teny lakile mba hanampiana anao hahazo vaovao mahaliana momba ny teny lakile mety hitranga. Ny fitaovana fikarohana ny teny lakile dia milaza aminao hoe iza amin'ireo teny lakile ilaina be, ny teny lakile manana ny angona ambany indrindra, ny volany ary ny angona vidiny isaky ny kitiho. Ho azonao atao koa ny milaza izay teny lakile ampiasain'ny mpifaninana aminao amin'ny pejiny malaza indrindra. Ny ankamaroan'ny fitaovana fikarohana teny lakile dia manolotra kinova maimaimpoana sy karama, na izany aza, raha te hizaha toetra ny fomba fiasany fotsiny ianao dia azonao ampiasaina ilay Google Keyword Tool Planner.
Manaova famaritana vokatra marani-tsaina
Raha vantany vao azonao tsara ny teny lakile mila ampiasainao dia azonao ampiharina amin'ny famaritana ny vokatrao izany. Zava-dehibe ny hialanao Keyword stuffing amin'ny famaritana anao. Fantatr'i Google rehefa tsy voajanahary ny atiny, ary mety ho voasazy ianao noho izany hetsika izany. Ny vokatra sasany amidinao dia mety toa manazava ny tenany; Ohatra, ny fivarotana famatsiana birao anao dia mety ho sarotra amin'ny famaritana ireo zavatra toy ny stapler sy taratasy. Soa ihany fa afaka mifalifaly amin'ny famaritanao ianao mba hanalana zava-manitra (ary hametahana ny tenanao mandritra izany).
ThinkGeek dia nanao izany tamin'ny andalana iray manontolo famaritana ny jiro jiro LED tsotra izay manomboka amin'ny andalana: “Fantatrao ve fa inona no mampinono momba ny jiro fandefasana jiro mahazatra? Misy loko roa ihany izy ireo: fotsy na fotsy mavo izay mampatsiahy antsika ny nifin'ny mpisotro kafe mafana fo. Inona no fahafinaretana toy izany? "
Amporisiho ny hevitra avy amin'ny mpiantsena
Rehefa manasa ny mpanjifa handao hevitra ianao, dia mamorona sehatra hanampiana amin'ny fampitomboana ny laharanao. One Fanadihadiana ZenDesk nahita fa ny 90% -n'ny mpandray anjara dia voataonan'ireo fijerena tsara amin'ny Internet. Ny fandinihana hafa dia nanondro ny zavatra hitany mitovy: amin'ny antonony, ny ankamaroan'ny olona dia matoky ireo mpandinika an-tserasera toy ny fatokisany ny tolo-kevitry ny vava. Zava-dehibe fa tsy ireo tsikera ireo ihany no eo amin'ny sehatra famerenana, fa eo amin'ny pejin'ny vokatrao koa. Misy fomba maro mandresy lahatra ny mpanjifa handinika ny orinasanao; mandanjalanja ny safidinao ary fantaro izay fomba mety amin'ny orinasao.
Mahazo fanampiana SEO
Raha mandresy anao ny resaka rehetra momba ny SEO, dia mieritrereta hiara-miasa amin'ny orinasam-barotra na masoivoho hitarika anao amin'ny làlana tsara. Ny fananana manam-pahaizana eo anilanao dia ahafahanao mianatra bebe kokoa momba ny teknika ao ambadiky ny SEO, ary koa mifantoka bebe kokoa amin'ny vokatrao, ary manome traikefa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Araka ny SEOInc, an Orinasa consultant SEO any San Diego, ny orinasa sasany dia manahy ny hiasa amin'ny maso ivoho noho ny tahotra ny familiana ny fifehezana, saingy tsy izany no izy - raha mbola miasa amin'ny orinasa malaza ianao.
Shopify dia nanjary safidy lehibe indrindra amin'ny fivarotana an-tserasera. Noho ny fitomboan'ny lanjan'ny mpanjifa mankany amin'ny tranokala mandeha amin'ny herin'ny Shopify, ny Shopify SEO dia niaina fitomboana haingana tato ho ato ary antenaina hitombo hatrany hatrany. SEOInc
Azonao atao mihitsy aza ny mieritreritra ny hiara-miasa amin'ny mpiasa tsy miankina za-draharaha izay manana fahaiza-manao azo zahana amin'ny SEO sy portfolio lehibe. Na inona na inona fanapahan-kevitrao, dia tadidio fa ny SEO dia zavatra tokony hatao tsara, ary raha tsy afaka manokana fotoana hianarana ny tetika tsara indrindra sy hampiharana azy ireo tsara ianao, dia fampiasam-bola tsara kokoa ny manolotra ireo fahaiza-manao ireo amin'ny antoko hafa.
Tags: ecommerce seofikarohana siantifikamanatsara ny fivarotanaSEOseoincshopifyfivarotana seothinkgeek
Izotope RX: Ahoana ny fomba hanesorana ny tabataba any aoriana amin'ny firaketana ny feonao
Zymplify: Marketing ho serivisy ho an'ny orinasa kely
24 Septambra 2017 à 1:17
Site mahafinaritra! Tia ny votoatinao!
22 Novambra 2017 à 1:21
tiako ity mpitari-dalana ity. misaotra betsaka nizara